Network နင့်ပတ်သက်သော ebookများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အိုက်ထွန်း, မောင်စိန်ရွှေ, ရွှေကိုင်းသား, အောင်မိုးထွန်း, babylay, htikewailinn, LaMike, linthuraaung, minthumon, ninimar, tartarlay18, yelinoo, zo
Communicating Systems and Networks: Traffic and Performance (Innovative Technology Series)
rapidshare.de နဲ့ ရန်ငြိုးရှိ သူများအတွက်...
Last edited by zthet; 04-05-2007 at 12:20 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
babylay, minthumon, yelinoo, zo
Re: Communicating Systems and Networks: Traffic and Performance
Originally Posted by zthet
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တယ်ကြီး, kyawtoe, zo
Network Technology စာအုပ်ပါ
ကျွန်တော်ဆရာက ကျွန်တော့်ကို ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ .. network နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခြေခံကျကျ နားလည်လာအောင် ဆလိုက်လေးတွေနဲ့ ကျကျနန ရှင်းလင်းပြထားပေးတာပါ .. ကိုယ်တိုင် ဂျစ်(စ်)ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပါခင်ဗျာ .. ကျွန်တော်က ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ ..
Last edited by tu tu; 05-09-2008 at 03:27 PM..
Wireless Network သုံးသူများအတွက် ကြည့်ကြည့်ကြဖို့ Advanced Wireless Communication စာအုပ်ပါ။
မောင်ပေါ်ဦး, asulike88, ninimar, zo
16-11-2007, 04:58 AM
Principle of AdHoc Network
AdHoc လို့ခေါ်တဲ့ အရေးပေါ် ကွန်ရက် အငယ်စားလေးတွေ ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ၊ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ၊ အခြေခံ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ စတာတွေကို လေ့လာ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. 2007 June မှာ Wily စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတာ ဖြစ်ပါတယ်...
File Info: 274 pages , PDF , 1.3 Mb
Download Info: PofAd-hocN.rar, 1.26 MB, Fileden
ဟိုအရင်က Web Technology ဆိုတဲ့ အီးဘုတ်တွေ တင်ပေးဘူးပါတယ် ..
ခုတခါတော့ Network နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ .. ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတာလေးတွေ တင်ပေးပါအုန်းမယ် ..
ပြန်စာ - Network Technology
ကိုပူတူးရေ ကျေးဇူးတယ်ပါတယ် ခင်ဗျား
ကျနော် ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာအီးဘုတ်တွေ လိုချင်ပါသေးတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nOv အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မြန်မာလိုတွေကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာပေးပါမယ့်ခင်ဗျာ ..
ခုတစ်ခါကတော့ wireless network security ပါ
Wireless Network အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ power point file တွေပါ ။
# Wireless TCP/IP
# Wireless Network Basic
# Portable Networks and the Wireless Web
# MAC Protocol for Multihop
Last edited by tu tu; 23-06-2009 at 11:51 AM.. Reason: add password
ဇရက်, ရဲထွတ်, သက်နှင်းစိုး, chit moe oo, ninimar, thureinsoe, TunMinnOo
ပို့စ် 48 ခုအတွက် 100 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Wireless Network
Visit အာကာမောင်'s homepage!
Find More Posts by အာကာမောင်
Communication Systems and networks B
Firewalls and Networks_how to hack into remote computers
Network Devices or Components
Network Review Questions
Developer Shed Network - The Soothingly Seamless Setup of Apache, SSL, MySQL, and PHP
Network+ - Network+ Certification Study Guide Ed 3
Last edited by မောင်တေဇာဝင်း; 05-06-2008 at 12:21 PM..
ကိုကိုတောသား, အောင်မိုးထွန်း, yoeyar
တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ programming for ms windows ဆိုတာက အင်္ဂလိပ် ဗားရှင်းမဟုတ်ဘူးဗျ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းရှိရင် ထပ်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
sorry ဘဲအကို ရေ ကျွန်တော်သေခြာမကြည့်တင်လိုက်မိတာ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကိုလည်ကျွန်တော်ရှာပေးပမယ်
ကို moe_poung ရေ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ် version ပြန်တင်ထာပေးပါတယ် အောက်မှာယူလိုက်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မောင်တေဇာဝင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
19-07-2008, 05:16 AM
Last edited by tu tu; 17-08-2010 at 08:39 PM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, မင်းခကို, အလတ်ကြီး, အိုင်တီကောင်လေး, ဇေယျာအေး, မေယမင်း, မောင်တေဇာဝင်း, အောင်စည်သူ, ဖြိုးယံလေး, comic_, ko myo, kyawkyaw17, maungzaw, ninimar, phoelapyaee, sundaysky
password ကဘာလဲအကို .. ညီစမ်းတာ ရဘူးဖြစ်နေလို့ ။
www.myanmarfamily.org ပါ . . . .
Networking: A beginner guide for network professional ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ ..
Last edited by tu tu; 10-11-2009 at 09:28 AM..
16-08-2008, 01:49 PM
ကိုဖြိုးမြင့်သိန်းတင် သွားတော့ ကောင်းသွားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တင်မလို့ စိတ်ကူးရှိတာ အခုတော့ အရံသင့်ဘဲ အားလုံးအဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်နေတုန်းက ပို့စ်တွေကို မနားတမ်းရေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် ကွန်ယက်ပို့စ်တွေ က ဆရာမျိုးသူရ စာအုပ်ထဲက များပါတယ်။ ဆေးရုံမှာဆိုတော့ စကင်နာမရှိဘူးလေ။ စာကိုရိုက်လာ အဆောင် ကို ခဏပြန်လာမှ လိုအပ်တဲ့ ပုံလေးတွေကို စကင်ဖတ်ပြီးတော့ တင်ပေးပေါ့။ ခုတော့ စကင်ဖတ်ပေးလိုက်တာ ပိုကောင်းသွားတယ်။
ဦးဇော်လင်းရဲ့ ကွန်ယက် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်ကို စကင်နာဖတ်ပြီးတင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ်ဗျာ။ အားတဲ့အချိန်နားတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ ifile.it ကဖြစ်ဖြစ် ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ
Find More Posts by kyawthu
Originally Posted by kyawthu
zshare | ifile
26-09-2008, 11:37 PM
Last edited by tu tu; 12-11-2009 at 10:09 AM..
အစ်ကိုရေ...တစ်ခြား networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိလေးရှိရင်
Last edited by tu tu; 10-10-2008 at 09:04 AM.. Reason: Quote ပြင်ရန်
ဆရာဦးဇော်လင်းရေးတဲ့ Networking Essentials နှင့် ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများ ဆိုတဲ့
စာအုပ်လေးရှိရင် မျှဝေကြပါအုံး အစ်ကိုတို့ ၊ အစ်မတို့ရေ
Find More Posts by luulinpyo
15-10-2008, 01:25 PM
Absolute Beginner Guide to Networking 4th Ed
Last edited by tu tu; 23-10-2008 at 08:28 PM.. Reason: ခေါင်းစဉ်ဖြည့်
Lwin Thu, Zin Ko